आमाले बाबाको पि’टाई देखि मानसिक या’तना पाएको सम्झेर अन्जु पन्तको छोरी परितोशिकाको आशु थामिएन ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
December 14, 2020 December 19, 2020 AdminLeaveaComment on आमाले बाबाको पि’टाई देखि मानसिक या’तना पाएको सम्झेर अन्जु पन्तको छोरी परितोशिकाको आशु थामिएन ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
नेपाली सांगीतिक दुनियामा गायिका अन्जु पन्तको नाम पनि निक्कै अग्रणी छ । उनको सुमधुर स्वरले सुसज्जित हजारौ गितहरु सार्बजनिक भैसकेका छन । तर गायिका पन्त सांगीतिक यात्रामा जति सफल छिन त्यत्ति कै बैबाहिक जीवनमा अस’फल भइन । पति मनोज राजसंगको जीवन निक्कै क’ठिन भएको उनले स्वीकार्दै आएकी छन ।
केहि वर्ष पहिले नै सम्बन्ध बि’च्छेद गरेकी अन्जु पन्त अहिले आफ्नो छोरी परितोशिकासंग बस्दै आएकी छन । अन्जुले अहिले आफ्नो छोरी परितोशिकालाई पनि मोडल बनाएकी छन । पन्तकै स्वरमा रहेको ‘धेरै माया नदेऊ मलाई’ बोलको गितको भिडियोमा गायिका पन्तकी छोरी परितोषिका पन्तको डेब्यु अभिनय रहेको छ भने उनको साथमा देखिएका छन्, मोडेल कुन्साङ बोम्जन ।
आफ्नो साङ्गीतिक करियरमा यो गीत निकै विशेष र उत्कृष्ट बनेको गायिका पन्तको भनाई छ । छोरी परितोषिकाले पनि यो गीत धेरै मन पराएर यही गीत मार्फत् अभिनय यात्रा प्रारम्भ गरेको अन्जुले बताईन् । गीतकार सुरेश वाग्लेले आफूले यो गजल फरक ‘थिम’मा लेखेकाले आफूलाई विशेष मन परेको उनले बताईन् ।
कुराकानीमा अन्जु र परितोषिका स्नेह देख्न सकिन्छ । कुराकानीमा अन्जुले छोरी माथी निकै ठुलो भरोषा राखेकी छन् भने केहि रहस्यहरु पनि खोलेकी छन् । कुराकानीकै क्रममा एक्कासी माहोल भा’वुक बन्यो । छोरीले विगतलाई सम्झिँदा अञ्जु भ’क्कानिएर रो’इन् । आमा रोएपछि परितोषिकाका आँ’शु पनि थामिएनन् । हेर्नुहोस् भिडियोः